Al-Shabaab oo weerar Khasaaro dhaliyay ka geysatay gudaha dalka Kenya & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Al-Shabaab oo weerar Khasaaro dhaliyay ka geysatay gudaha dalka Kenya & Wararkii...
Al-Shabaab oo weerar Khasaaro dhaliyay ka geysatay gudaha dalka Kenya & Wararkii ugu dambeeyay
Lamu (Halqaran.com) – Warbaahinta Kenya ayaa tebinaysa in maleeshiyaa looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ay maanta weerareen bas marayey degaanka Nyongoro oo ka tirsan gobolka xeebta ee lamu.
Wararka ayaa sheegaya in weerarkaas ay ku dhinteen saddex qof kadib markii maleeshiyaad rasaas rideen, ayada oo tiro kalena ay ku dhaawacmeen.
Warbaahinta Kenya waxa ay sheegaysaa in sidoo kale Shabaab ay afduubteen dad ka mid ahaay kuwii baska saarnaay.
Ciidamada ammaanka Kenya ayaa sheegay inay ku daba jiraan kooxdii ka dambeysay falkaasi dadka lagu dilay, sidoo kalena dadka lagu dhaawacay.
Kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay kordhiyeen weerarada ay ka gaysanayaan gudaha dalka Kenya.
Ciidamada Kenya ayaa qaati ka taagan weerarada Shabaab ay ka gaystaan gudaha dalkaasi, xilli Laga soo laabanaayo Ciida Kirismiska.
Al Shabaab weerar ka fuliyay gudaha dalka Kenya
gobolka Xeebta ee Lamu